884 online! | Sidvisningar idag: 15 353 | Igår: 231 636 |
Tage Bergman pfungwa dzinonakidza pamusoro yakasiyana kukohwa nguva kuti tinoona muBhaibheri. nguva izvi yokukohwa vachitaura panguva imwe chete apo tinogona kutarisira kuti kubvutwa Assembly kunoitika.
Kana chido kubvutwa? Zvichava pamberi kana pashure kutambudzika? Pane pfungwa dzakawanda nezvazvo, uye maonero akasiyana chaizvo. We kudzokera zvakare uye zvakare kuna magwaro akawanda sokuti zvakaoma kunzwisisa. Asi, tinogona kutarira vapfumi mufananidzo Bhaibheri panhau, iro rinopa mhinduro yakajeka. Hatinzwisisi zvinokosha shoko rouprofita zvino hatigoni zvakanaka kunzwisisa kuoma kududzira kutaurwa.
Gay vanorega peal
The ngochani vaimbova SVT Profile Pekka Heino inobudisa kuti kuramba anokumhan'arira yakaganhuka vachiridza mabhero kuchechi Kungsholmen mu Stockholm.
Kubvutwa, kwaAntikristu uye Kutambudzika Kukuru zviri nyore kunzwisisa kana uchitenda muna Bhaibheri
Avo vane kuti nguva dzose kundorwa ichi, unogona kuzviita kumwe, asi kwete pano musi Apg29. Ndinogamuchira hapana pachake nedzematongerwe uye kwete pakuwanza dzakatsveyama ose Apg29!
Propaganda kudyidzana hurumende Schematic ushamwari kuSweden
Reader Mail ne AJ
Izvi zvinofadza, zvino anomhanya pepanhau Metro kubva nemashoko (peji pamberi, pamwe zvizere kupararira) kuti musayendisiti enyika uyo anoti Annie Lööf anogona kuwana inotevera kuedza kuti vaumbe hurumende uye ave Prime Minister of Sweden.
pakukura terevhizheni kambani wechiKristu enyika invests mune Nordic TBN muna Stockaryd
Kubva Mugovera, July 7, 2018 ikozvino anozviratidza kuna Media House Friends, yaizotanga TV2020 iyo zvino vakava Lifely Channel, pasi zvizivikanwe TBN Nordic.
Fast nguva kupondwa Swedish makiriniki
Kana ndichinge kunzwisisa zvakarurama, ndiko umhondi kana iwe kuuraya munhu kuzvironga, apo umhondi iri kurongwa. Sezvo yekuronga pamuviri, hachizi chinhu asi umhondi!
Elida vanoshanyira Israel
Swedish Elida, yokubatana chaienda vashoma yechiKristu chete gutsaruzhinji muMiddle East, kusvika kuna Israeri.
Turkey ari bhizimisi mazana emamiriyoni vachivaka mosques rose
Hurumende Turkish iri vachipedza mazana emamiriyoni kuvaka mosques ari refu chinangwa yokuparadzira Islam pasi pose.
Hijab vana kutengeswa
The British dhipatimendi chitoro cheni Marks & Spencer misika munhu barnhijab akakodzera 6-8 gore vane vana vane makore.
Kana vatongerwa kuhero?
Pose Ndakaberekwa, saka paaipa ruponeso makandipa. Handina kuponeswa nokuti Ndakaberekwa muna "nyika wechiKristu", asi nekuti Jesu vakanditsvaka!
Hapana anogona kunyengedza Jesu
Hello demo! Sezvo kana akaita kuti kumunyengera?
Kubvutwa - akaropafadza tariro!
"The kubvutwa ndiyo kuchinja mupenyu vatendi ruzivo apo Ishe hunodzokera kuwana vatendi kudenga. Vanhu vachabva vava kuti kushandurwa, pasina kusangana rufu. "
Unofanira kuitei kuti vakarasika kuti ive gehena husingaperi?
Horoscope, mindfulness uye yoga zvitendero Eastern
Mumagazini zhinji, uye kunyange mumapepanhau, muri zvenyeredzi. Nyaya nhau anogona kubudisa chinhu kufungira anogona zvirokwazvo kusava.
On December 10, anonyora nhengo kunyika yeUnited Nations pasi vakasununguka immigration
On December 10, kudhindwa gwaro nokuda UN iro rinonyanya painovazarukira vakasununguka immigration.
Same-zvepabonde muchato anogona wairambidza muRomania
Same-zvepabonde muchato anogona hazvitenderwi muRomania. vhiki ino, nyika sarudzo hongu kana kwete kushandura Constitution zvokuti chete muchato unofanira kuva mubatanidzwa pakati pemurume nemukadzi.
Vecka 42, lördag 20 oktober 2018 kl. 01:43
Mweya Mutsvene kubva pasi pa pakubvutwa
Comment nezita LelFA
Achitaura hurukuro pamusoro ndiani "zvinogona kukurirwa." Ngationei kuti koinegrekiska inokosha rugwaro.
Globalism zvaingoreva kurwiswa zvose zvinobatanidzwa rudzi ndiani kuita, uye EU iri sangano rayo guru - kanenge zvematongerwo.
MuJudha Tel Aviv akarota yekubvutwa
"Ini Hope kuti hwamanda, uye Ndakamhanya kumukova kumberi uye utsvake. Zviuru zvevanhu kubva rwaIsraeri nokukwezvwa kumusoro nomumakore uye vari akapfeka chena uye denga rinotsemuka uye mutumwa Gabriel chiri kudenga kumusoro uye vachiridza hwamanda. "
The vasingadiwi Chikamu gumi
The inoshamisa nyaya kukura muruwa nemhuri yaanoziva.
Makorokoto Malle Lindberg makore 89
Nhasi ndiro kunozivikanwa muvhangeri makore Malle Lindberg 89! Akaberekwa 290,929th Malle Makorokoto!
vanhu 400 vakaurayiwa nokudengenyeka kwenyika uye tsunami, kuIndonesia
vanhu vanoda kusvika 400 vakaurayiwa nokudengenyeka kwaizotevera Tsunami pachitsuwa Sulawesi muIndonesia. sezvo vazhinji About vakuvara uye vazhinji chinoshayikwa.
Annie Lööf nhengo kuvanza Trilateral Commission
Nhasi anozivisa Green Party Birger Schlaug uye Malou Lindholm pakati Center Party mutungamiri Annie Lööf ari nhengo dzakavanzika globalist vepamusoro sangano, ari Trilateral Commission.
Uchawana Annie Lööf wehurumende?
Ava Center Party mutungamiri Annie Lööf vakakokwa Bilderberg kumusangano muna 2017 kuti aizova Sweden inotevera wehurumende?
musikana ane makore 8 okuberekwa akafa muchato usiku
A muMuslim musikana ane makore 8-okuberekwa akafira muchato usiku yavo Yemen!
Mashizha vawa - kuchava kumutsidzirwa zvino?
Stefan Löfven aiva ichi mangwanani vanobviswa sezvo wehurumende. Chii chiri kuitika iye zvino, uye chii chinoitika Sweden? Vanhu kuna Mwari? Pachava kumutsidzirwa?
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 446 301 602 sidvisningar på Apg29!